TikTok laghachiri India mgbe ewepụrụ mmachibido iwu ya | Androidsis
TikTok laghachiri India mgbe e bulisịrị mmachi ya
La iwu nke Ngwa ihe nkiri vidiyo na -ewu ewu na -ewu ewu TikTok na India ọ gbagharịa, dịka akụkọ si kwuo Reuters, nke akpọtụrụ ndị ọka iwu abụọ metụtara okwu a. Ihe karịrị nde ndị India na -arụ ọrụ nde 120 nwere obi ụtọ!
Ngwa a, ka na -eche ịlaghachi na ụlọ ahịa Google na Apple (PlayStore na App Store, n'otu n'otu).
Ụlọikpe Kasị Elu nke Madras kwagara iwepụ mmachibido iwu ahụ, ma ọ bụrụ na ebuteghị ihe gbasara mmekọahụ na ikpo okwu yana na ọ ga -eleba anya na mkpesa ọ bụla metụtara ọdịnaya n'ime oge elekere atọ ruo 36, ma ọ bụrụ na amalitere nlelị nke usoro iwu.
Na mbido ọnwa a, Courtlọ ikpe steeti rịọrọ gọọmentị etiti ka ọ machibido nbudata TikTok ọhụrụ, na -ekwu na ngwa ahụ "na -akwado ihe na -akpali agụụ mmekọahụ" yana "ọdịnihu ndị na -eto eto na echiche ụmụaka na -emebi."
N'izu gara aga, Ministri Eletrọniki na Teknụzụ Ozi obodo nyere Apple na Google iwu ka ha wepu ngwa ahụ n'ụlọ ahịa ngwa India ha. Mmachibido iwu a metụtara ndị ọrụ ọhụrụ nwere ike ibudata ngwa ahụ. Ndị ọrụ dị adị nke tinyegoro ya nwere ike ịga n'ihu na -eji ya.
TikTok kwuru na nkwupụta ya, "Obi dị anyị ụtọ na mkpebi a ma kwenye na ọ bụkwa obodo anyị na -eme nke ọma na India, nke na -eji TikTok dị ka ikpo okwu iji gosipụta ihe okike ha, nabatara ya nke ọma." dị ka ihe na -egosi nkwenye anyị na -aga n'ihu na ndị ọrụ anyị n'India. '
Nke a abụghị nsogbu TikTok mbụ nwere nsogbu. N'ọnwa Febụwarị, TikTok (nke bụbu "Musical.ly") kwetara ịkwụ US $ 5.7 nde iji kwụọ ebubo na ọ "nakọtara ozi nkeonwe n'aka ụmụaka n'ụzọ iwu na -akwadoghị" site na ịnweta nkwenye. ọrụ ahụ.
Ngwa TikTok gafere nbudata otu ijeri na gburugburu ụwa na Storelọ Ahịa na Storelọ Ahịa Play
TikTok, nke ByteDance nwere, ruru nde mmadụ 500 na -arụ ọrụ kwa ọnwa, mana India bụ ahịa ya kacha ukwuu n'ihi inwe ihe karịrị nde mmadụ iri abụọ na -arụ ọrụ kwa ọnwa. Companylọ ọrụ ahụ kwuru na mmachibido iwu a na -akpata mfu ihe dị ka $ 500,000 kwa ụbọchị ma na -etinye ihe karịrị ọrụ 250 n'ihe egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » TikTok laghachiri India mgbe e bulisịrị mmachi ya
A na-edozi Huawei P Smart Z kpamkpam na ihe ijuanya nke igwefoto ya
OPPO A9: Ọkara ọhụrụ nke akara ndị China